ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Dynasty Gold And Jewellery
ဟန်းချိန်း နှင့် ခြေကျင်းများ
Today Gold Price -112,250/-MMK
© 2020 DYNASTY Gold & Jewellery
DYNASTY Gold & Jewellery ကို 2017 ခုနှစ်ထဲက စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၁၆ ပဲရည်ပြည့် အခေါက်ရွှေ 24K , 999/999.9 အဆင့်မီရွှေထည်များကို HK မှနည်းပညာ ကိုအသုံးပြုပြီး ဖန်တီးထားသော ရွှေထည်လက်ရာ ဒီဇိုင်းလှလှလေးများ၊ Charm လက်ရာဒီဇိုင်းလှလှ များကို တစ်နိုင်ငံလုံးကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေပါသည်။
ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး မိတ်ဆွေများရဲ့ ယုံကြည်စွာအားပေးထောက်ခံမှုနှင့်အတူ 24K အခေါက်ရွှေများသာမက 18K, 22K (၁၅ပဲရည်)‌‌ ရွှေရည်များကိုပါ တွဲဖက်ရောင်းချကာ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆိုင်ခွဲပေါင်း (၂) ခုကိုအောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
Divine , Pure & Unique ဟုဆိုသည့် DYNASTY ၏ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကာ ပစ္စည်းပေါ် တာဝန်ယူမှုနှင့် စေတနာတို့ကို အရင်းခံကာ အကောင်းဆုံး ဆက်လက်ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
DYNASTY GOLD & JEWELLERY
မြန်မာပြည်သူများအတွက် မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာအပြည့်ဖြင့် ခေတ်မှီဆန်းသစ်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး အကောင်းဆုံးသော ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးစွမ်းနေသည့် ကျောက်မျက်ရတနာကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် ဈေးကွက်ဦးဆောင်သူဖြစ်ရန်။
အကျိုးတူစီးပွားဖက်များ – ကျွန်ုပ်တို့သည် အကျိုးတူစီးပွားဖက်များနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဆက်ဆံရေးနှင့် ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို တည်ဆောက်ရမည်။
ဝယ်ယူသူများ – ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝယ်သူများ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ၎င်းတို့လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီပြီး ကောင်းမွန် သည့်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အစဉ်တစိုက် ပေးအပ်ရမည်။
ဝန်ထမ်းများ – ကျွန်ုပ်တို့သည် မျှတမှု၊ မတူကွဲပြားမှု၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အသိအမှတ်ပြုမှုတို့တည်ရှိနေသော ယဉ်ကျေးမှု ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မိမိဝန်ထမ်းများ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ တည်ဆောက်နိုင်ရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်။
“ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု” – ဆိုလိုသည်မှာ အချိန်၊ ဝီရိယ၊ ယုံကြည်မှု၊ တိုးတက်လိုမှု ဖြစ်သည်။
“ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတည်ဆောက်မှု” – လူတိုင်းတွင် အလုပ်အကိုင်မဟုတ်ပဲ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်း ရှိသင့် သည်။
“ ယဉ်ကျေးမှုမျှဝေခြင်း” – လူတိုင်းစိတ်တူကိုယ်တူနှင့် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စောင့်ရှောက်ရမည်။
“ မျှတမှု” – ထုတ်ဖော်စရာပင်မလို တန်းတူရရှိမည့်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။
“ မတူကွဲပြားမှု” – ဆိုလိုသည်မှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှု နှင့် ကတိကဝတ် ပေါ်တွင်အခြေခံ၍ ရရှိလာသော အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။
“ လုပ်ပိုင်ခွင့်” – လူတိုင်း မိမိတာဝန်ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်မည်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ အသိအမှတ်ပြုမှု” – သတ်မှတ်ထားသော ရည်မှန်းချက်ကို မှန်ကန်သော အပြုအမူများဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။
ထူးခြားကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းခွင်မှတဆင့် တန်ဖိုးမြင့်မားသည့် အမှတ်တံဆိပ်ကို ဖော်ဆောင်လိုစိတ်အပြည့်ရှိနေသော အရည်အချင်းများပြည့်ဝသည့်သူများနှင့် Dynasty၏ ကောင်းမွန်သောအစဉ်အလာများတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသည်။ ဤအစဉ်အလာကောင်းများသည် တစ်ဦးချင်း၏ ပါဝင်မှု၊ တာဝန်ယူမှုနှင့် ကတိကဝတ်များ သာမက အချင်းချင်းလေးစားမှု၊ ယုံကြည်မှု၊ ချိတ်ဆက်မှု၊ တာဝန်ခံမှု နှင့် အသင်းအဖွဲ့စိတ်ဓာတ်များ ပါရှိရန်လိုအပ် ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုမ္ပဏီ၏ တာဝန်များကို အောင်မြင်မှုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းတွင် ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ရှင်းလင်းသေချာမှု နှင့် အတူတကွညီညွတ်စွာဆောင်ရွက်မှုများ၏ အရေးပါခြင်းကိုလည်း ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပါသည်။
ထူးခြားကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းခွင်မှတဆင့် တန်ဖိုးမြင့်မားသည့် အမှတ်တံဆိပ်ကို ဖော်ဆောင်လိုစိတ်အပြည့်ရှိနေသော အရည်အချင်းများပြည့်ဝသည့်သူများနှင့် Dynasty၏ ကောင်းမွန်သောအစဉ်အလာများတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသည်။ ဤအစဉ်အလာကောင်းများသည် တစ်ဦးချင်း၏ ပါဝင်မှု၊ တာဝန်ယူမှုနှင့် ကတိကဝတ်များ သာမက အချင်းချင်းလေးစားမှု၊ ယုံကြည်မှု၊ ချိတ်ဆက်မှု၊ တာဝန်ခံမှု နှင့် အသင်းအဖွဲ့စိတ်ဓာတ်များ ပါရှိရန်လိုအပ် ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုမ္ပဏီ၏ တာဝန်များကို အောင်မြင်မှုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းတွင် ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ရှင်းလင်းသေချာမှု နှင့် အတူတကွညီညွတ်စွာဆောင်ရွက်မှုများ၏ အရေးပါခြင်းကိုလည်း ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပါသည်။
01 - 371 742, 09 - 96 200 4450, 09 - 8877 99953
No (307), Corner of Shwedagon Pagoda Road & Mawgun Taike Street. Dagon Township. Yangon
09 - 976 094 6580, 09 - 8877 99963
Level-2, C-011, Yangon
Time City Branch
09 - 8877 999 73, 09 - 8877 999 83
Level-1, A-120 (Jewellery Mall)
02 - 4034 593, 02 - 4030 198, 02 - 403 6006
No(B-10) 78th Road, Between 32nd & 33rd, Zawtika Street. Mandalay
Dynasty Loyalty Program